Intervention by Myanmar on Agenda item 74: Promotion and Protection of Human Rights at the Interactive Dialogue with the Special Envoy of the Secretary-General on Myanmar, Third Committee of the Seventy-Sixth session of UNGA
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Christine Burgener နှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းမှ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြသည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအား ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့
၁။ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းသည် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် (၇၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံ၊ တတိယကော်မတီ၌ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Christine Burgener နှင့် virtual အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
(က) မြန်မာပြည်သူများ၏ ဒီမိုကရေစီလိုလားတောင်းဆိုမှုအပေါ် အစဉ်တစိုက် အားပေးထောက်ခံလျက် ရှိသော ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်တို့ကို အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊
(ခ) ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြချက်နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအတွက် ယခုအချိန်သည် နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသ တွင်း၌ အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရမည့် အချိန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်မှုတွင် သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပါအဝင် ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးကို ချက်ချင်း လွှတ်ပေးရေးသည် အဓိကပါဝင်ကြောင်း၊
(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ လျှောက်လှမ်းမှုတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က လွတ်လပ်မျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲများ၌ မဲပေးခြင်း ဖြင့် မြန်မာပြည်သူများက ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်စနစ်အပေါ် လိုလားယုံကြည်မှုကို ပြသခဲ့ကြောင်း၊
(ဃ) ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းက စစ်တပ်အကြီးတန်းအရာရှိကြီးများသည် ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည့် သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့်အား ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြင်းမပြုပါက ထိခိုက်နစ်နာမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြောင်း၊ သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့် သည် အသက်သာအသေခံမည်ဟု ၎င်းတို့၏ အရှက်မရှိသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုကို တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊
(င) မြန်မာစစ်တပ်သည် ကြီးမားသည့် နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုအဖြစ် တရားမဝင်အာဏာသိမ်းခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ရေးသားခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း၊
(စ) အာဏာသိမ်းမှု (၉)လနီးပါးရှိသည့်အချိန်တွင် ပြည်သူ (၅၄)သန်းကို လက်နက်နှင့် ရက်စက်မှုဖြင့် အုပ်ချုပ်၍မရကြောင်းကို သိသာထင်ရှားစွာပြသနေကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သူများသည် တာဝန်ခံမှုကင်းမဲ့ သည့် တရားမဝင်စစ်တပ်ကို ၎င်းတို့၏ အစိုးရအဖြစ် လုံးဝအသိအမှတ်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ပြည်သူများက စစ်တပ်သည် ၎င်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးရသည့် အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘဲ သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ် သည့် အဖွဲ့အစည်းဟု မြင်နေကြောင်း၊
(ဆ) မိမိတို့သည် ပဋိပက္ခကို အားမပေးကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာအဖြေရှာခြင်းကိုသာ လိုလားကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သူများသည် ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေး၊ ရွေးကောက်ခံခေါင်းဆောင်များ ပြန်လည်လွှတ်ပေး ရေးနှင့် အရပ်သားအစိုးရထံ အာဏာပြန်လည်ပေးအပ်ရေးတို့ကို လပေါင်းများစွာ ငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်း ဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် စစ်တပ်၏ တုံ့ပြန်မှုသည် ယခုအထိ ကလေး (၇၅) ဦး အပါအဝင် အရပ်သား ပြည်သူ (၁၂၀၀) ဦး အသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ကြောင်း၊
(ဇ) အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် ဆန့်ကျင်သူအားလုံးကို ရက်စက်စွာတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ပြည်သူများအား ကာကွယ်ရန် လုံလောက်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာပြည်သူ များသည် ရွေးချယ်မှုမရှိဘဲ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန် ဖြစ်လာကြောင်း၊ ယင်းသည် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ တော်လှန်ရေးသည် အဓိကအကြောင်း ပြချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ ပြည်ပမှ အားပေးထောက်ခံ မှု၊ အစွန်းရောက်မှုတို့ကြောင့် လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း၊ ပြည်သူများကို အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်နေသည့် စစ်တပ်၏ ကြီးမားသည့်သေစေနိုင်လောက်သည့် အန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊
(ဈ) အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း လိုက်နာရမည့် ဥပဒေများနှင့် အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် ပြုမူဆက်ဆံမှုတို့နှင့်အညီ ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်များ၏ ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများကို ချမှတ်ထားကြောင်း၊ အစိုးရဝန်ထမ်းထောင်ပေါင်းများစွာသည် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကို ဆန့်ကျင်၍ အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု၌ ဆက်လက်ပါဝင်လျက်ရှိကြောင်း၊
(ည) ရိုဟင်ဂျာကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်တပ်မှ ယခင်နှင့် ယခုကျူးလွန်ထားသည့် ပြစ်မှုအားလုံးအတွက် တာဝန်ခံမှုနှင့် တရားမျှတမှုရှိရေးအတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍​ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အားပေးကူညီမှုရရှိမည်ဟု ယုံကြည် ကြောင်း၊
(ဋ) အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်(၅)ချက် တွင် အာဆီယံခေါင်းဆောင်များအား စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် ကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့သည့် သဘောတူညီချက်သည်ပင် ယခုအခါ အနှစ်သာရမရှိသည့် ကတိကဝတ်ဖြစ်နေ ကြောင်း၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအပါအဝင် နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာ ပြည်သူများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် အကျပ်အတည်းမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကူညီရန်ဆန္ဒရှိမှုကို အသိ အမှတ်ပြုကြောင်း၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် အားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် မျှော်လင့် လျက်ရှိကြောင်း၊
(ဌ) မြန်မာစစ်တပ်သည် ၎င်း၏လုပ်ရပ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်မှသာ နိုင်ငံအခြေအနေ ပုံမှန်အနေအထားသို့ ရောက်ရှိ၍ တည်ငြိမ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခအား ရပ်တန့်ရန်၊ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ခံအစိုးရထံ နိုင်ငံအာဏာ ပြန်လည်အပ်နှံရန်၊ အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်မီနှင့် အာဏာသိမ်းပြီး စစ်တပ်မှ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုများအတွက် တရားဥပဒေနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိရေး၊ စစ်တပ်အား အရပ်သား ထိန်းချုပ်မှုအောက်၌ ထားရှိရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ​တည်ဆောက်ရေးတို့ အတွက် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ၏ ကူညီမှုသည် အထူးအရေးကြီးကြောင်း၊ “Injustice anywhere isathreat to justice everywhere” - “တစ်နေရာ၌ မတရားမှုသည် နေရာတိုင်း၌ တရားမျှတမှုကို ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်သည်” ဟူသော ဒေါက်တာ မာတင်လူသာကင်း၏ ပြောကြားချက်ကို အမှတ်ရကြောင်း၊
(ဍ) မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ ရပ်တည်၍ ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်မှုများကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Christine Burgener အား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားလိုကြောင်း၊ ၎င်း၏နေရာ၌​ တာဝန် ထမ်းဆောင်မည့် အထူးကိုယ်စားလှယ်အသစ်အား မြန်မာနိုင်ငံ ၌ ဒီမိုကရေစီအသိုက် အဝန်းတစ်ရပ် ဖော်ဆောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်ကို သိလိုပါကြောင်း၊
၃။ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအား ပူးတွဲဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Intervention by Ambassador Kyaw Moe Tun, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to United Nations
at the Interactive Dialogue with the Special Envoy of the Secretary-General on Myanmar, Third Committee of the Seventy-Sixth session of UNGA
Myanmar wishes to thank the Special Envoy for her comprehensive and frank briefing today. I also wish to thank, through her, the Secretary-General for his report.
We acknowledge with deep appreciation the Secretary-General, the Special Envoy and the United Nations' continued support for the democratic aspiration of the people of Myanmar. As the report has precisely noted, it is time to takeaunified international and regional response to help put Myanmar back on the path to democratic reform, and such effort must be accompanied by the immediate release of President U Win Myint, State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, and other unjust detainees.
Myanmar is undergoingaprocess of democratization and in doing so, the free and fair general election was successfully held on November 8 2020. When our people cast the overwhelming majority of their votes in favour of the National League for Democracy led by State Counsellor DawAung San Suu Kyi, they demonstrated their support not just forapolitical party but also their trust and confidence inademocratic system of governance. And the civilian government has also madeavery firm resolve to continue striving hard to be worthy of the people’s trust and confidence. Ever since the civilian government took over responsibility in 2016, it has never lost sight of the ultimate goal which is to establishapeaceful and developed federal democratic union.
On early morning of February 1, the senior military officers came to democratically elected President U Win Myint and threatened him to resign - or face harm. The President replied that he would rather die than consent to their brazen threat. However, as an act of high treason, the military went ahead to perpetrate the illegal coup, blatantly violating the Constitution they themselves wrote. Since then, the situation in my country continues to deteriorate, with the destruction of hard-won gains over the last decade in strengthening democratic institutions, political and civic space, good governance, economic reforms, independent judiciary and the rule of law.
Now after nearly9months, it is crystal clear that over 54 million people cannot be governed by guns and brutality. Under any circumstance, the people of Myanmar will never accept the unaccountable and illegal military junta as their government. In fact, the military is now more like an occupying force in the eyes of the people of Myanmar, notaprotector of the people that it is supposed to be.
We do not advocate violence. Peaceful solution is always our preferred choice. However, for months and months, people of Myanmar have tried every possible peaceful way in demanding respect for our will democratically expressed in the 2020 elections, release of our elected leaders and others unjustly detained and hand-over of power to the elected civilian government.
However, the military’s response to their rightful demands has been horrifically atrocious, ruthlessly murdering almost 1,200 civilians including more than 75 children. Because of continued brutality by the military against anyone perceived as opposing their illegal coup, with no adequate international action to protect the population, the people of Myanmar had no choice but to resort to defending themselves. This is the core rationale behind the people’s defensive revolution. It is not because of incitement, not because of foreign encouragement, not because of extreme polarization, but simply because of the lethal danger posed by the military that is terrorizing the population into submission. At the same time, the National Unity Government has been rigorously advancing the PDF code of conduct especially relating to respect for the laws of armed conflicts and treatment of civilians. Moreover, hundreds of thousands of civil servants from every government institution continue to defy the military junta inanationwide peaceful civil disobedience movement.
Importantly, make no mistake: the military junta is not at war withaparticular political entity, but with the whole population of Myanmar who do not want to go back to the system we used to be in, that is the military dictatorship. Our experience tells us what life means under the unaccountable military rule.
The military coup and subsequent widespread atrocities led toanational awakening towards long-overlooked grievances of our ethnic minorities. A deep sense of understanding and solidarity has emerged. We now haveaunique opportunity to end persistent military impunity and address those grievances to achieve genuine reconciliation.
Regarding the issue of Rohingya, as I said in the general debate, the National Unity Government is actively seeking accountability and justice for past and ongoing serious crimes committed by the military including against Rohingya people. We believe we can count on support of UN member states in this regard.
There isareason why the people of Myanmar have no trust in the words of the military council. Even the agreement the military leader himself made to ASEAN Leaders in 5-Point Consensus now turns out to be no more thanahollow promise. We appreciate our neighbours, ASEAN members and countries in the region and beyond which sincerely want to help the people of Myanmar out of this crisis. The NUG always looks forward to engaging with all of them.
At the same time, I can assure you that until the military change their course of action returns the state power to the people; there will be no normalcy or stability in the country. To end this current catastrophe, it is imperative for the regional and international community to help create conditions in which state power is handed over to the democratically elected government, the transitional justice and accountability is ensured for serious crimes committed before and after the coup, the military is put under the democratic civilian control, andafederal democratic state is built based on the principles of democracy, equality, justice and the rule of law. I am please to recall the words of Martin Luther King, “Injustice anywhere isathreat to justice everywhere.”
Towards this, echoing the Secretary-General’s call in his report, I strongly appeal for an urgent unified international and regional response to help put Myanmar back on the path to democracy.
My statement would not be complete without expressing deep appreciation to the Special Envoy. I wish to commend her for her dedication, hard work, and friendship as well as for her principled and firm position, remarkable attitude of paying attention and listening to the people’s concern, most importantly standing with the people of Myanmar. I wish the Special Envoy, every success in her new endeavours.
I wish to conclude by posingaquestion to the Special Envoy. Based on your firm position of standing with the people, what will be your recommendation to your successor to make Myanmaraprosperous and democratic society?